SocialReacher: Gini bu mgbasa ozi ndi mmadu na-aru oru? | Martech Zone
Saturday, December 17, 2016 Satọde, Febụwarị 13, 2021 Douglas Karr
N’otu ọgbakọ nwere ọdịnaya, egere m enyi m ntị Akara Schaefer ekwu okwu banyere otu ụlọ ọrụ nwere ihe karịrị otu narị puku ndị ọrụ mana ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na-elekọta mmadụ mgbe akara a na-emelite mgbasa ozi. Kedu ụdị ozi nke ahụ na-ezigara ndị na-azụ ahịa? ka Mark jụrụ. Nnukwu ajụjụ na azịza ya dị mfe. Ọ bụrụ na ndị ọrụ - ikekwe kachasị ndị na - akwado akara a - anaghị ekekọrịta mmelite mmekọrịta, ha doro anya na ha abụghị ihe bara uru ịkekọrịta ma ọlị.
Anyị na ụlọ ọrụ ọha na eze ọzọ rụkọrọ ọrụ bụ ndị ndị ọrụ ha bụ ndị ọkachamara na-ahụ maka ndị ahịa. Ndị a abụghị ala nke usoro CSRs, ha na ndị ahịa ọ bụla na-arụ ọrụ iji wepu esemokwu dị n'etiti ndị ahịa na ndị ọzọ, ma ọ bụ chọta ndị ahịa nnukwu azịza. Kwa ubochi ha gha aru oru ma nweta ihe di egwu. Naanị otu nsogbu… ọ dịghị onye maara banyere ya. Ndị otu ọdịnaya ejikọtaghị akụkọ ndị a. Ndị otu mgbasa ozi anaghị akwado akụkọ ndị a. Ndị ọrụ anaghị ekekọrịta akụkọ ndị a.
Kasị njọ, ndị na-achọ ịzụ ahịa mgbe nụrụ akụkọ.
M gbara ụlọ ọrụ ume ka ha tinye otu atụmatụ ịkwado ndị ọrụ ebe enwere ike ịgbasa akụkọ na ndị otu ọdịnaya, ndị otu mgbasa ozi nwere ike ịrụ ọrụ na mmekọrịta ọha na eze ma kwụọ ụgwọ iji kwalite ọdịnaya ahụ, yana - kachasị - ndị ọrụ ga-ekwughachi ọrụ ịtụnanya ha na-arụ.
N'ụzọ dị mwute, ụlọ ọrụ ahụ nọgidere na-etinyekwu ego na mgbasa ozi telivishọn ọhụrụ na mgbasa ozi. Ug.
Kedu ihe bụ mgbasa ozi ndị na-elekọta mmadụ?
Ngwaọrụ ndị ọrụ na-elekọta mmadụ na-elekọta mmadụ na-enyere ndị ọrụ ụlọ ọrụ gị na ndị ọrụ aka ka ha bụrụ ndị na-elekọta mmadụ maka akara gị. Mgbe ndị ọrụ na-akwalite ma kwughachi ọdịnaya gị, ihe omume, akụkọ, na mmelite gị site na mgbasa ozi mmekọrịta, atụmatụ a na-eme ka ụlọ ọrụ mgbasa ozi nke ụlọ ọrụ gị dịkwuo elu, na-eme ka akara gị dị elu, na-ewulite ntụkwasị obi site na itinye ndị otu gị ịkekọrịta na ịkwalite ọdịnaya ụlọ ọrụ.
Na nso nso a ulo oru, Onye na-elekọta mmadụ bụ ikpo okwu wuru maka ndị ọrụ na ndị na-emekọ ihe iji chọpụta ma kesaa akụkọ ụdị gị. Kachasị mma, ị nwere ike soro nsonaazụ ya yana kpalie ikekọrịta. Dabere na Altimeter, 21% nke ndị na-azụ ahịa na-ahọrọ ọdịnaya nke ndị ọrụ bipụtara, na-emezigharị usoro ndị ọzọ
Onweghi ihe ị ga-ekwenye karịa ịnwe ndị ọrụ gị ndị maara ụlọ ọrụ ahụ n'ime n'ime iji aka ha kesaa ọdịnaya gị ma gosipụta mpako ha na ịbụ nzukọ gị. Ndị ụlọ ọrụ ugbu a nwere ohere ịnweta nnukwu ego mmadụ, mana ndị ọrụ bụ isi ahịa azụmaahịa na-enweghị atụ. Ebumnuche anyị na SocialReacher bụ ịkwalite mgbasa ozi mgbasa ozi maka ụlọ ọrụ ebe anyị na-enyere ndị ọrụ aka ka ha tinye aka na mmepe na uto nke akara a. Ismael El-Qudsi, onye isi oche nke Internet República
Atụmatụ na ike nke SocialReacher
Nhazi Mfe - onye njikwa mkpọsa ahọpụtara na-ekpebi ụdị ọdịnaya a ga-ekerịta, mgbe a ga-ebido mkpọsa ahụ, ngalaba nke ndị ọrụ ga-ezubere iche, yana ebe a ga-eji usoro mgbasa ozi ọha na eze mee ihe.
Nkwado ọdịnaya tupu oge a - ikpo okwu na-enye ohere maka ịnwepụta ọkwa tupu ha edepụta ya iji kwado usoro atụmatụ ahịa zuru ezu.
Ntinye aka Dashboard - ụlọ ọrụ nwere ike ịgbalite ụgwọ ọrụ iji gbaa ndị ọrụ ọrụ ụgwọ na mkpọsa.
Ahụmịhe abụọ - a na-enweta ikpo okwu n'asụsụ Bekee na Spanish maka mgbasawanye ọdịnaya zuru oke na ahịa eburu n'uche.
Nchịkọta Oge - ụlọ ọrụ nwere ohere ịnweta njikọ zuru ezu nchịkọta, gụnyere retweets, mmasị, clicks, nkọwa na echiche nke ọdịnaya kwa onye ọrụ na mkpọsa.
Kedu ka SocialReacher si arụ ọrụ?
The Onye na-elekọta mmadụ ikpo okwu dị mfe iji hazie ma debe ya. Ọ na - agbaso usoro usoro usoro dị mfe iji jikwaa ndị ọrụ gị mfe, dozie ọdịnaya gị ịkekọrịta, kesaa ya, tụọ nzaghachi, ma kpoo ojiji ọzọ site na ịme egwuregwu.
Kpọọ ndị ọrụ na ndị ọrụ
Mepụta na idozi ọdịnaya
Kekọrịta ọdịnaya gị
Tụọ ihe ọ rụpụtara
Nye ha agbamume
Ihe ikpo okwu na-akwado mgbasa ozi na Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, LinkedIn na ọbụna na blọọgụ nke ndị ọrụ. Nke a bụ nseta ihuenyo nke SocialReacher dashboard:
Emepụtara ikpo okwu ma wepụta ya Intanet Nweta, ụlọ ọrụ na-ere ahịa dijitalụ nke pụrụ iche na ịmepụta azịza ahịa na ntanetị nke na-ejikọ SEO, mgbasa ozi mmekọrịta yana ike ịde blọgụ. Ntọala na Madrid, Spain na 2011 site na otu ndị ọrụ mbụ HAVAS na ndị isi Microsoft, Internet República agbasawo mba ụwa na ụlọ ọrụ dị na United States na Latin America. Companlọ ọrụ dịka BMW, Volkswagen, Renault, Bacardi, na Yahoo tụkwasịrị obi na Internet República na mgbasa ozi ahịa dijitalụ ha.
Tags: ntinyeọrụ nkwadoọrụ gamificationIntanet Nwetamgbasa ozi mgbasa ozionye ọrụ soshal midiamgbasa ozi onye ọrụ na-elekọta mmadụonye na-elekọta mmadụkedu ihe bụ ịkpọ ndị ọrụkedu ihe bụ mgbasa ozi mgbasa ozi